GetProspect: Chọta adreesị email B2B na Jikwaa Atụmatụ Atụmatụ | Martech Zone
GetProspect: Chọta adreesị email B2B ma jikwaa ndepụta atụmatụ
Fraịde, Ọktọba 2, 2020 Fraịde, Ọktọba 9, 2020 Douglas Karr
Dị ka adịghị m amasị spammed, Aga m ekweta na enwere oge na ndị mmadụ achọtala adreesị email m wee kpọtụrụ m maka azụmaahịa ziri ezi. N'ezie, akwụgoro m ndị ọrụ ngo ole na ole wee zụta nyiwe ole na ole site na ozi ịntanetị na-apụ apụ na-ezigara m.
Nke ahụ kwuru, ana m atụ anya na ị ga-asọpụrụ nkwukọrịta ndị a:
Research - Achọrọ m ịma na achọpụtara m pụrụ iche maka otu ebumnuche.
Personalization - Achọrọ m ka onye ahụ mee ka m mara n’ezie ihe nzube ahụ bụ na atụmanya ha.
Họrọ ọpụpụ - Achọrọ m ụzọ m ga-esi pụọ na ịrịọ arịrịọ ahụ ma ghara ịnata ozi email ọzọ ma ọ bụrụ na ọdabara.
Nweta Email FindProspect
N’oge gara aga, emegoro m (gasp) enweghị atụ na zụrụ nnukwu email anatara. Agbanyeghị, ọ bụ ụlọ ọrụ na-ese ihe n'ezie, yabụ, ohere ị nwere imebi aha gị na imechi onye na-ere email gị dị elu. Ọ bụrụ na ịme nke a, ị ga - agagharị na ndepụta ahụ site na ngwa ọgụgụ ọgụgụ email iji hụ na ị naghị ebubata ozi ịntanetị spam na ozi ịntanetị ga-agbalite.
NwetaProspect bụ nchịkọta ọchụchọ na adreesị email jikọtara ya na igwe ọgụgụ isi nke na-edekọ ihe ndekọ ruo oge. Nanị ntinye njirisi ọchụchọ gị na onye na-ewepụta email anyị ga-enye ndepụta aha na ozi ịntanetị ụlọ ọrụ, ọnọdụ, URL profaịlụ LinkedIn, aha ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ, weebụsaịtị, na ọtụtụ ndị ọzọ!
Nweta Atụmatụ Atụmatụ
GetProspect na-enye nnukwute interface mbubata, chọọ, nza, hazie, na mbupụ atụmanya gị.
GetProspect Prospect Management Atụmatụ Gụnyere:
anatara - Kpokọta profaịlụ gị amịpụtara na listi. Jiri aha, ụlọ ọrụ, ọnọdụ, wdg.
Mmekọrịta - Bubata ma ọ bụ bupu atụmanya gị gaa na ngwa 750 gụnyere Linkedin, Salesforce, Pipedrive, Zoho CRM, Mailchimp, Mailgun, na G Suite.
Team - nwere ike ikpokọta ndị otu gị ịkekọrịta atụmatụ gị iji nyere aka chọpụta atụmanya ngwa ngwa.
Mbupụ na Excel - Mbupụ achọtara kọntaktị na XLS faịlụ na ozi amịpụtara na ozi ndị ọzọ.
Nnukwu Bubata - Chọta ndepụta nke ozi ịntanetị ozugbo. Naanị mbubata faịlụ nwere aha na ozi ụlọ ọrụ wee chọta ozi ịntanetị na nnukwu.
Company Ama - Chọta ozi bara uru dịka ụlọ ọrụ weebụsaịtị, adreesị anụ ahụ na akara ekwentị, nha ụlọ ọrụ, ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ na ndị ọzọ.
Debanye aha ma nweta adreesị email 200 n'efu
Ngosipụta: Ana m etinye njikọ njikọta m maka NwetaProspect - jiri koodu 6rE12 mee ihe ka ị nwee ike nweta adreesị email elele anya 200!
Tags: b2bchọta adreesị ozi-echọta adreesị ozi-enweta adreesị email site na njikọIche echichegsuiteLinkedInndị ahịa
Freshmarketer: Nyochaa, nwalee ma hazie nke a na Conversion Optimization Suite